Views | News Filmy | Page 2
रेखाले खोलिन् : स्कुलको ब्यायफ्रेण्ड देखि छवि ओझा सम्मको कहानी
December 20, 2014 12:12 pm
मिस कोसी’ मेरो जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । ९ कक्षा पढ्दा नै ‘मिस कोसी’ भएँ । स्कुलमै पत्रकारहरू अन्तर्वार्ता लिन आउँथे । ‘ए म त ठूली पो भएछु’ भन्ने लाग्थ्यो । बिस्तारै पढाइमा रुचि लाग्न छाड्यो ।
अब रुन छाड स्वेता / तिमीले श्रीमान् त गुमायौ तर गौरव गर्ने धेरै कुरा पायौ
जीवन होस् त नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जस्तो । बोन क्यान्सर भएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले कसैगरी मृत्युलाई जित्न सक्ने अवस्था थिएन । धेरैले श्रीकृष्णले रोगी भएर पनि विवाह गरेको भन्दै दु:ख मनाउ गरेको सुनियो । सत्य पनि यहि हो । यत्ति हो, यति चाँडै यस्तो घटना घट्ला भन्ने न स्वेताले सोचेकी थिइन्, न श्रीकृष्णले न त हामी जस्ता शुभचिन्तकले नै । तैपनि श्रीकृष्ण स्वेतालाई धेरै कुरा दिए ।
पढ्नुस् लेख : श्रीकृष्णले भनेका थिए
August 13, 2014 12:34 pm
• २०५७ साल। चितवनको एउटा इँटा भट्टामा ‘ए मेरो हजुर’को सुटिङ् भइरहेको थियो। चलचित्रका नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरको भूमिकामा थिए। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भट्टाबाट इँटा उठाउँदै डोकोमा राखिरहेका थिए। ४/५ सय इँटाभएको थुप्रो लड्यो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ इँटाले पुरिए। हतार हतार क्रुले उनको उद्दार गर्‍यो र अस्पताल पुर्‍यायो।
राजेश हमालले रिलमा अनगिन्ती विवाह गरे । रियल विवाह चाँहि यो पहिलो हो । यसले उनलाई रिलको सेटबाट रियलको सिटमा झार्छ र त्यही कोणबाट सोच्न बाध्य पनि पार्छ । अर्थात्, उनको लागि पनि यतिबेला विवाह के हो ? यो प्रश्न रहेन, विवाह के हैन ? चाँहि अहम् प्रश्न बनेको हुनुपर्छ ? यो आफैंमा एक बहुआयामिक प्रश्न भएकाले उनले पनि त्यही कोण र सोचबाट उत्तर नखोजी धरै छैन ।
सन्दर्भ ‘बुद्ध जयन्ती': बुद्ध बारे भ्रम फैलाउने फिल्महरुको नालिबेली
May 14, 2014 6:09 am
कुरा केही समय अगाडिको हो । एउटा हिन्दी फिल्ममा तथागत भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भन्ने खालको प्रसङ्ग राखिएको कारण नेपालमा यसको ठूलो विरोध भयो । त्यो फिल्मको शिर्षक “चांदनी चोक टु चाइना” हो ।विरोध भएपछि सम्बन्धित पक्षले फिल्मको त्यो अंश हटाउने सहमति गरे । नेपालमा त हटाइयो पनि ।
अनुसन्धान : भारतीय नायिकासँग राजा त्रिभुवनको आशक्ति !
श्यामा नाम गरेकी एक अभिनेत्रीसँग राजा त्रिभुवनले सम्बन्ध गाँस्न चाहन्थे । फलस्वरूप उनले यसै क्रममा एउटा चलचित्रमा पाँच लाख भा.रू. लगानी गर्न तयार पनि भए (चलचित्रकर्मी नीर शाहको भनाइमा आधारित) । यसको मध्यस्थकर्ताका रूपमा देखिए कोलकातामा सङ्घर्ष गर्दै गरेका दार्जिलिङका युवा डी.बी. परियार ।
March 29, 2014 6:24 pm
उमेरको हिसाव गर्ने हो भने महानायक राजेश हमाल ५० बर्षका भएका छन् । आगामी बर्ष उनी फिल्म ईन्डष्ट्रीमा प्रवेश गरेको ठीक २५ बर्ष पुग्छ । उनी २०४७ सालमा ‘युग देखि युग सम्म ‘ भन्ने फिल्मबाट फिल्म ईन्डष्ट्रीमा प्रवेश गरेका हुन जतिबेला उनको उमेर २६ बर्षको थियो ।
अभिनेत्रीहरुले समेत गम्भिर भएर सोचिदिए हुन्थ्यो कि ?
नेपाली फिल्ममा हिरोइन बन्न कुनै योग्यता चाहिन्दैन भन्ने मान्यता परिवर्तन आएपछि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन् । फिल्महरुको वर्गीकरण हुन नसकेको अवस्थामा सबै खालका कलाकारलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्दा नेपाली अभिनेत्रीहरु बेलाबेला गसिपका पात्र बनिरहेका छन् ।